Warar Sir ah iyo Dagaal ka Dhextaagan Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Aug 16, 2010 dambiile, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, somalia
Sirihii ugu dambeeyey ee ka dhexdhacay bisha August 2010 kooxda Jwxo-shiil iyo qoraaladii ay isu direen kooxdu, oo maanta na soo gaadhay. Qoraalada e-mailka ee ay isweydaarsanayaan kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxaa ka muuqda isqabqabsi badan iyo dagaal kooxda ka dhex shidan. Waxayna isku canaanayaan in looga hormaray heshiisyadii ay Itobiya la galilahaayeen.
Waakan qoraaladii ay isweydaarsadeen ee ka bogta.
Re: dacaad daro halgan Friday, August 13, 2010 10:18 PMFrom: This sender is DomainKeys verified”Duale Sahardid” <killinbe@yahoo.ca>Add sender to ContactsTo: “maxamed cumar” <hahadi67@yahoo.com>, “maxamed ismaciil” <isimoh@yahoo.com.au>, awcadaani@yahoo.com, guuleh1@yahoo.com.uk, “maowlid” <abdifatah_hersi@yahoo.com>, “xassan iraad” <qubbi_85@yahoo.com>, “cusman bedel” <cabdinur_dhagacade@yahoo.com>, “kamas” <ladane_osman@yahoo.co.uk>, mhubeeye@htmail.com, curjin2003@yahoo.com… moreSalaan qaali ah, dabadeed waxaa aad iyo aad nasiib daro u ah oo wax la”la yaabo ah in maxamed ismaaciil oo sheeganaya in uu yahay hogaamiyaha labaad ee jwxo uu isticmaalo
luuqada noocan ah ee uusan isticmaalin qof masuul ah iyo qof wax kala garanaya toona.
Anigu shaqsi ayaan ahay oo dhibaato iguma hayso luuqada noocan ah balse ma’suuliyiinta iyo xubnaha kale ee qoraaldiisa akhrisanahaya muyeeynan ka mudnayen qadarin iyo ixtiraam? mise wuxuu u arkaa in aynan wax kala garanayenin ama ay indho la yihiin? meeday wax-garadnimadii,dhaqankii fiicnaa iyo aqoontii masuuliyadeed ee lagu doortay ama laga rabay qof masuul ah. midakale wax yaabaha tacatiga ah ee ay geeysteen maxamed ismaaciil,maxamed macalin iyo cadirahmaan dheere waxaan u hayaa cadeeymo
ducument ah qokii u baahana wuu ila soo xidhiidh kara.
FG: maxamed ismaaciilow ama isdifaac oo dhibaatooyinka aad geeysatay iska difaac
ama si geesinimo leh u qiro inta goori goor tahay ee aynan xeedho iyo fandhaan kala dhicin, laakiin wixii u dhexeeya waa riwaayada iyo filimada aad sheegeyso ee aad jilayso adigu.
— On Wed, 8/11/10, Moh Isi <isimoh@yahoo.com.au> wrote:
From: Moh Isi <isimoh@yahoo.com.au>
Subject: Re: dacaad daro halgan
To: “Duale Sahardid” <killinbe@yahoo.ca>
Received: Wednesday, August 11, 2010, 5:30 PM
Riwaayaddan oo kale hadda ka hor ayey na soo martay. Kuwii dhigayeyna way ka dhamaatay oo waa kuwaas xarooday. Khalad ayaa fahamtay adiga iyo kuwa kugu raacsan khaladka oo waxaad is tidhaahdeen maanta JWXO khilaaf baa haysta oo way gabane aan barnaamij aan ogaa inaad horey ugu jirteen fulino. Si fiican ayaan ula socdaa talaabo kasta iyo shirkasta oo aad qaadeen.
Waxaa kuu sheegi anigu fikirkayga iyo garashadayda ayaan ku socon adiguna midkaaga ku soco. Anigu natijada aan ka helo wax kaa siin maayo (saa kuuma arko inaad tahay nin daacad ah oo urur ah), adiguna waxba ha iga siinin natijada aad ka hesho.
— On Wed, 11/8/10, Duale Sahardid <killinbe@yahoo.ca> wrote:
From: Duale Sahardid <killinbe@yahoo.ca>
To: “Moh Isi” <isimoh@yahoo.com.au>
Received: Wednesday, 11 August, 2010, 9:11 AM
Ina Ismaaciilow waxaa nasiib daro ah in aadan fahansaneeyen halganka aad hormuudka ka tahay ee aad ku hageyso nidaamka indho la”aanta ah eexda, qabiilka iyo nin jecleeysiga,
sal dhigeeduna yahay war-lugeedka aad ka soo dhaga dhegeeyso maxamed macalin iyo kuwo aan dhaamin oo aad ugu tala gashay in aad halganka ku bur-buriso. waxaana tusaale Jaaliyadii fort mcmurray, midii london,tii edmonton,finland,minisota iyo kuwo kaleba,waxad ku dumisay waxaas iyo wax la mid ah,waxaana cadeeyn u ah su”aashii lagu wediiyey markii aad halkan timid ee ahayd maxaad u kala dirtay jaaaliyadii fort mcmurray? iyadoo aynan sharciga jabhada meela kaga jirin jaaliyad shaqeeynaysa in la kaladiro waxaad kaga jawaabtay Cabdiraxmaan dheere ayaa been ii sheegay.
Hadii ay dhacdo in jabhad la samayeeyo wax nidaam ah oo diidaya ma jiro umaduna xaq bay u leedahay in ay wax sameeysato. wax lagaa weydiina majirto.
Ina islmaaciilow labadeena keenee wax duminaya? ma waxaa wax duminaya ninka suura geliyey in jaaliyadihii dibadu baaba’aan meel kastana ay daba qoodhigu shirar isdaba joog ah ku qabsadaan,mise ma waxaa wax duminaya inka leh war sidaa ka daaya.
waa la soo dhaafay xiligii boodhka laysku qarin jiray maantana xaqii baa dilaacay oo ma jiri doonto xaq daro iyo tacati danbe.
FG: Qoraalkaygii kan ka horeeyey ee aan soo dhigay shaashada waxay ku socotey Gudoomiyaha Jowxo, iyadoo ay kaa muqato in aadan hab maamulka garanaynin ayaa waxaad ku soo dhex dhacaday qoraal aan adiga kugu soconin oo aad weliba maroorsatay masuuliyad aadan lahayen.
Ninkii wax dumiyey maanta iyo ninkii wax dhisayeyba taariikhda ayaa qoreysa waana la xisaabtami doonaa xili aan fogeen.
— On Tue, 8/10/10, Moh Isi <isimoh@yahoo.com.au> wrote:
To: hahadi67@yahoo.com, “Duale Sahardid” <killinbe@yahoo.ca>
Cc: awcaddaani@yahoo.com, guuleh1@yahoo.co.uk, qubbi_85@yahoo.com, cabdinur_dhagacade@yahoo.com, ladane_osman@yahoo.co.uk, abdifatah_hersi@yahoo.com, curjin2003@yahoo.ca
Received: Tuesday, August 10, 2010, 4:01 PM
Saxardiid, tan oo kale way na soo martay. Dad aan halgan fahmin uguna jira dan gaar ah, dhibka uu ku hayo ka badan tahay wax tarkiisa. Waan la socday inaad qorshaysay inaad urur sameysaan ka madax banaan JWXO. Haddii uuna qofku sidii la rabay u soo raacin halgan JWXO hogaaminayso waa loo baahan yahay inaad sameyso Jabhad u dagaalanta gobonimada Ogadenya. Waxaa lagaa rabaa inaad magaceeda sheegto midaad waan sameyn leedahay (waan is kaashaynayaa), mise waa la qarinayaa.
Waan ka xumahay xubnaha Jabhadda eed si gaar ah u siinayso Og sidii iyaga oo qorshahan (qoraal kale oo xubnahaas Og ugu jirana wuu jiray) aad ugu talo gashay inaad halganka ku burburiso (mana kari kartid) taas oo muujinaysa inaad dhaqdhaqaaq nooca aan la dagaalamayno ah aad waddo. Waxaan ku leeyahay ‘ Good luck’.
— On Tue, 10/8/10, Duale Sahardid <killinbe@yahoo.ca> wrote:
Subject: dacaad daro halgan
Cc: isimoh@yahoo.com.au, awcaddaani@yahoo.com, guuleh1@yahoo.co.uk, qubbi_85@yahoo.com, cabdinur_dhagacade@yahoo.com, ladane_osman@yahoo.co.uk, abdifatah_hersi@yahoo.com, curjin2003@yahoo.ca
Received: Tuesday, 10 August, 2010, 10:11 AM
Salaan qaali dabadeed ,mudo afar ilaa iyo shan sano ah halgankii umada reer ogadeeniya waxaa lagu sameeyay marin habaabin oo waxaa laga leexiyay ujeedadii iyo hadafkii loo abuuray,waxaana soo shaac baxday tacatiyo ka baxsan nidaamka halganka oo loogeeysta xubno jabhadeed oo aan tiradooda la soo koobi karin kuna sugan canada,ameerika,yurub,australia,bariga dhexe iyo africa.
Tacatiyada lageystay oo ah kuwa aad iyo aad lug ugu yeeshay halganka iyadoo la isticmaalayo awood masuuliyadeed ama power abuse oo sharcigii iyo nidaa mkiiba jabhadu lahayed baa lagu tuntay iyadoo laisticmaalayo qabiil,nin jeclaysi, eex iyo taageerada xaq-darada,markii ay wax yaaabahasi dheeceen masuuliyiintii lagula gal-gashay ee larabay in ay wax ka qabtaana waxay taageereen xaq-daradii iyagoo mar kastana ay u dheertahay af lagaadado iyo af xumo. tusaale ahaan Maxamed Ismaaciil oo ah madaxii labaad ee jabhada ayaa ah shaqsi aad iyo aad qabi u ah oo aan lahayen dhaqan,iyo masuuliyad toona.isagoo adeegsada qabiil,hanjabaad iyo awooda masuuliyada uu hayo.gabagabdii waxay ila tahay arintani meel ayeey isugu biyo shubatay oo ninmankani way tashadeen waxayna go”aansadeen in aynan cid kale talin karin ONLFna way ku kaliyesteen ismana qabanayaan oo xaq-darada raali ayeey isaga yihiin wixiim dhibaato ah ee ka yimaadana masuuliyadeeda ayaga ayaa leh.wakhti aan fogeeyna qolo waliba jabhad ayeey sameeysan.
Fg ;Maxamed cumaroow halgankan madaxiisu waa adiga Ina Ismaaciil ,Maxamed m acalin iyo Abdirahmaan dheere wixii ay haleeyaan adiga ayaa ka masuulah in aad ka amuusto tacatiyada ay geesanayaana ma aha ee waa in aad ka hadasho waxna aad ka qabato. hadii kale hade raali baad uga tahaye been hanoosheegin oo ha odhanin halgan
baan ku jiraa.